Ezona zizathu zixhaphakileyo zokunxiba iindevu, izibonelelo | Amadoda aQinisekileyo
Zeziphi izizathu onokuthi ubenazo zokuba nentshebe?
Nangona iifashoni ziza kwaye zihambe Ukufaka iindevu ngumkhwa oqhubeka ngonaphakade. Nokuba kusehlotyeni, xa amaqondo obushushu aphezulu abangela umnqweno, ngamanye amaxesha ongalawulekiyo, ukuvumela izimbobo zobuso zibile ...
Nangona kunjalo, ukunxiba iindevu ngumba ogqitha ngaphaya kwexesha, ihlobo okanye ubusika. Yindlela yokuphila. Yindlela yokuba yiyo.
Izizathu zokunxiba iindevu
Umfanekiso owomeleleyo nophambili. Kwinqanaba lokungazi besele silazi, nangona kunjalo, kuye kwakho izifundo ezininzi eziqinisekisileyo: amadoda anxibe iindevu abonakala omelele kwaye ebalasele, phambi koontanga bethu naphambi kwamantombazana.
Umcimbi wokuba sempilweni. Amadoda aneendevu ahamba ngokulula, awemi kuwo nawuphi na umceli mngeni kwaye banokuzithemba okupheleleyo kubuchule babo nakwizinto ezinokubakho.
Kwimeko yentlalo. Amadoda aneendevu abonwa yinxalenye elungileyo yabemi, njengoko abantu abakwizinga eliphezulu ekuhlaleni, ngamandla amakhulu kunye nemali.
Kuba bayathanda: Besele siyikhankanyile le ngongoma ngaphambili, kodwa kuyafuneka ukuba ubuyele kuyo. Uninzi lwamantombazana luyaqonda ukomelela kunye nokhuseleko kwiinqwelomoya ezinxibe iindevu.
Ukubonisa ukukhula: Nokuba ungakanani na ubudala, xa indoda igqiba kwelokuba ikhulise iindevu zayo, kungenxa yokuba Amaxesha obuntwana asemva. Oku akuthethi ukuba asonwabanga. Enye into ayinanto yakwenza nenye.
Ukubonisa ukuba sinempilo eqinileyo. Iindevu ezigcweleyo ayibonisi ukuzithemba nokuzithemba kuphela, ikwayinto enye amajoni omzimba omeleleyo kunye nomzimba ophile qete. Ukongeza, ibonisa ukuzala.
Kuba ukucheba yonke imihla kuyabetha. Isenokungabi sisizathu kuwo onke amatyala. Kodwa abasebenzi abaninzi ekufuneka beye emsebenzini kwangethuba, cinga lonto ixesha okoko bavuke ebhedini babaleke ayilokucheba.
Imithombo yemifanekiso: Umxholo / Upsocl
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Zeziphi izizathu onokuthi ubenazo zokuba nentshebe?
Ewe, kwimeko yam ijongeka ngathi iyabulala, ke akukho ndlela yakukushiya
Ukubopha okanye ukubopha iqhina?
ILouis Vuitton iphefumlelwe ngokuntywila kwimithombo yayo yasentwasahlobo / yehlobo ngo-2018